ဆောင်းပါး Archives ~ Page2of 53 ~ မနောမယ ဂမ္ဘီရဂျာနယ်
စနေသားတစ်ယောက် နေ့လယ်က ရောက် လာပါတယ်။ သူ့သူဌေးပိုင်ခြံထဲမှာ သူတို့မိသားစုကို ထားလို့ သူတို့ မိသားစုပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ကြတာ တစ်ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ Read more about သရဲတွေ့တဲ့ကလေး … …
Posted in: ထူးဆန်းထွေလာ, ပရလောက, ဆောင်းပါးTagged: စိန္တာမယဆရာပိုင်manawmaya	 January 18, 2019
စာရေးသူမှာ ယခုအသက်အရွယ်အားဖြင့် အတော်ကြီးရင့်နေပြီ။ ၇၅ နှစ်ဟူသော သက်တမ်းအရ ယခုကာလ လူ့သက်တမ်းတွင် အဘိုးအရွယ်၊ အဘအရွယ် ရောက်နေတာတော့ သေချာသည်။ Read more about ကိုယ်တွေ့တစ္ဆေမ …
Posted in: ပရလောက, ဆောင်းပါးTagged: ကျော်မင်းနိုင်manawmaya	 January 18, 2019
လူတိုင်းလူတိုင်း သေရမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။ လူတိုင်း တစ်သက်လုံး ဒီရုပ်နာမ်ခန္ဓာကြီးကို မြတ်နိုးစွာ စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိမိထက် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပိုပြီး ချစ်ခင်ရသူမရှိပါဘူး။ ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီး ပျက်စီးသွားလျှင် လုံးဝ ရုပ်နာမ်ပါပျက်စီး သွားမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘဝသစ်တစ်ဖန် ပြန်ဖြစ်ဦးမှာလား။ Read more about သေခြင်းတရား …
Posted in: ထူးဆန်းထွေလာ, ဆောင်းပါးTagged: ဆရာဝင်း(သာကီနွယ်)manawmaya	 January 18, 2019
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ လက်ျာရံနှင့် လက်ဝဲရံများ
ကျွန်တော်သည် မနောမယဂျာနယ် အမှတ် (၈၉၇)တွင် လာဘ်များသောအရာ၌ ဧတဒဂ်ရသော အရှင်သီဝလိမထေရ်အကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ရေးသားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါစာပိုဒ် ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ Read more about ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ လက်ျာရံနှင့် လက်ဝဲရံများ …
Posted in: ဆောင်းပါးTagged: မောင်ဥာဏ်စိန်manawmaya	 January 18, 2019
ဟောဒီပုတီးလေးနဲ့စိပ်ရင် ပိုပြီးကောင်းမယ်။ Read more about မနောမယစိပ်ပုတီး …
Posted in: ယတြာ, ဆောင်းပါးTagged: မင်းသိင်္ခmanawmaya	 January 13, 2019
ကမ္ဘာကြီး ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုးက ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြေအနေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်၊ ၁၅ နှစ်က အခြေအနေနဲ့ မတူတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကစပြီး သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရောက်မှုတွေ ပိုပြီး အကြိမ်တွေများလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ Read more about ကမ္ဘာကြီး ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုးက ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ …
Posted in: ထူးဆန်းထွေလာ, ဆောင်းပါးTagged: ဆရာဝင်း(သာကီနွယ်)manawmaya	 January 9, 2019
တစ်နေ့သ၌ လှိုင်မြို့နယ် ဘူတာရုံလမ်း မှတ်တိုင်အနီး၊ အေးရိပ်မွန် ၁ လမ်းတွင်ရှိသော ကျွန်ုပ်၏ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဟောခန်းကလေးအတွင်းဝယ် ကျွန်ုပ်သည် ဂျာနယ် တစ်စောင်အတွက် စာမူတစ်ပုဒ်ကို အသည်းအသန် ချွေးတလုံးလုံးဖြင့် ရေးသားနေရလေ၏။ . အဘယ်ကြောင့်စာမူကို အေးအေးလူလူမ ရေးဘဲ အသည်းအသန်ရေးနေရသနည်းဟု မေးဖွယ်ရာ ရှိပေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆရာကြီး အဘမင်းသိင်္ခသည် စာရေးသောအခါ၌ ပါးစပ်မှ ခေါ်ပေးလေ့ရှိ၏။ လက်ရေးလက်သား သွက်လက်သပ်ရပ်သော တပည့်တစ်ဦးဦးက နောက်မှလိုက်ပြီး ရေးပေးရ၏။ . ကျွန်ုပ်သည် အဘရေးခဲ့သော စာမူပေါင်းများစွာကို လိုက်ရေးပေး ခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံရှိ၏။ သို့ဖြစ်ရာ အဘရေး သော ဟန်၊ အဘ၏လေသည် ကျွန်ုပ်၏ နားစည်မှ သည် နှလုံးအိမ်သို့တိုင် စွဲထင်လျက် ရှိလေတော့၏။ အဘ၏ တွေးပုံတွေးနည်း အငွေ့အသက်တို့သည်လည်း […]
Posted in: ယတြာ, ဆောင်းပါးmanawmaya	 January 3, 2019